‘ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်’ ဆိုတဲ့အမိန့် ခေတ်ကောင်းနေဆဲလား ~ Htet Aung Kyaw
‘ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်’ ဆိုတဲ့အမိန့် ခေတ်ကောင်းနေဆဲလား
1:39 AM Htet Aung Kyaw No comments
Wednesday, 19 February 2014. The Voice Daily.
နေ့စဉ်ရက်ဆက်လိုလို ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ၊ သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေ ပြန်ရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲ၊ လုပ်အားခ တိုးပေးရေး ဆန္ဒပြပွဲ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေကြားမှာ (Bulldozer) မြေထိုးစက်ကြီးနဲ့ ထိုးဖြိုခံလိုက်ရတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာက အိမ်လေးတစ်လုံး အကြောင်းကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်မှု အရှိဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
Share လုပ်သူ ၄၀၀၀ နီးပါး၊ Like လုပ်သူ တစ်ထောင်နီးပါး၊ Comment ရေးသူ ၃၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ အဲဒီ ဗီဒီယိုကလစ်ကို တွေ့မိတော့ အခုချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုး အနိုင်ကျင့်တာတွေ ရှိနေဆဲလားဆိုပြီး အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဒီဗီဒီယိုကလစ်ဟာ အစစ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား။ (Setting) ဆက်တင်ဆင်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာကိုများ တစ်ယောက်ယောက်က နောက်ပြီး တင်လိုက်သလားလို့လည်း သံသယ ဝင်မိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သတင်းနောက်ခံ အချက်လက်တွေကို အွန်လိုင်းပေါ် လိုက်ရှာကြည့်တော့ ဒီဗီဒီယိုကလစ်ဟာ Setting မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့အရပ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမ သီတင်းပတ်တွင်းက အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်အနီးရှိ လှည်းကူး မြို့နယ်မှ အိမ်ခြေ ၄၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ သမီးကလေး ကျေးရွာဟာ စစ်တပ်ပိုင်တဲ့ မြေပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် သီတင်းတစ်ပတ်အတွင်း ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ အမိန့်စာထုတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွာသားတွေက မပြောင်းဘဲ တင်းခံနေတဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ လ ၄ ရက်နေ့မှာ အခုလို အင်အားသုံး ဖြိုဖျက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလို အင်အားသုံး ဖြိုဖျက်တဲ့အပေါ် အတော်များများက လူသားချင်း စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ဝေဖန်ရှုတ်ချကြပေမယ့် ‘ကျူးကျော်အိမ်ရာဆိုရင် ဒီလိုပဲ ရှင်းပစ်ရမှာပေါ့’ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ၊ မြေထု၊ ရေထုအားလုံးကို နိုင်ငံတော်နဲ့ စစ်တပ်ကပိုင်တယ်၊ စစ်ရေး လိုအပ်ချက်အရ ဒါမျိုးလုပ်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကိုလည်း အဲဒီ Link ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ အသွင်ကူးပြောင်းနေချိန် ဆိုပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်သူတွေကြားမှာတော့ ခေတ်ဟောင်းက (Mindset) စဉ်းစားပုံတွေ မပျောက်သေးဘူး ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
‘ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်’ ဆိုတဲ့အမြင် ခေတ်ကောင်းနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ရေဘူးပေါက်နေတာလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားရကောင်းမှန်း မသိသေးတဲ့သဘော။ အများပြည်သူရဲ့ ဘဝထက် အပေါ်က အမိန့်ပေး ခိုင်းစေလာသူရဲ့ ဆန္ဒကိုသာ ဦးစားပေးနေဆဲဆိုတဲ့ သဘောကိုသာ တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်ကိုတော့ ထားလိုက်ပါတော့။ ဒါပေမဲ့ အခုက အများပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသူတွေ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ် မဟုတ်ပါလား။ ဆိုတော့ ဘာကြောင့် လူတွေ ရာ-ထောင်ချီပြီး ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ လာနေကြတာလဲ။ ဒီကနေ မောင်းထုတ်လိုက်ရင် ဒီလူတွေ ဘယ်မှာ သွားနေကြမှာလဲ။ ဒီအတွက် အစိုးရက ဘာတွေ စီစဉ်ပေးထားသလဲ။ ဒါတွေဟာ လူထုက ရွေးထားတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အခြေခံ အချက်တွေ မဟုတ်ပါလား။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကသာ အဲဒီလို စဉ်းစားနေတာ။ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီလိုမစဉ်းစားတဲ့အပြင် နေအိမ်အဖြိုခံရလို့ ထွက်ပြေးလာပြီး အနီးနားရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေရတဲ့ အဲဒီရွာသားတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း အဲဒီကျောင်းကနေ ထပ်ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမိန့်ထပ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ‘အောင်သိဒ္ဓိ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းတွင် ယာယီ ခိုလှုံနေထိုင်သော သမီးကလေး ကျေးရွာမှ မိသားစုများအနက် အခြေခံပညာ သင်ကြားမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ မရှိသော အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅၆ စု၊ လူဦးရေ ၂၀၀ ကျော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှစတင်ကာ တစ်ပတ်အတွင်း ဖယ်ရှားပေးရန်’ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမိန့် ထပ်ထုတ်ထားပါတယ်တဲ့။
“ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး ၁၄ ခုထဲက လူဦးရေ ၄၀၀ ရှိ ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ သာဓကသာ ရှိပါသေးတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ နီးနေလို့ လူသိသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး လူမသိသူမသိနဲ့ အလားတူ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတဲ့ ရွာတွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိနေမှန်း ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိနိုင်ပါ။
နောက်ထပ် ဝင်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရဆိုရင် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် အစိုးရ ပလပ်မြေပေါ်က ကျူးကျော်နေအိမ် ၄၀၀၀ ကျော်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထား ဖျက်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထား ပါတယ်တဲ့။
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ်၊ ဘုရားကုန်း ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာကို ဖျက်သိမ်းပေးရန်နှင့် ယင်းကျေးရွာရှိ နေအိမ် ၁၄၀၀ ကျော်ကို နှစ်ပတ်အတွင်း ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့။
ကဲ ... ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဒါတောင် ရန်ကုန်ဝန်းကျင်က သတင်းတွေ လောက်ကိုသာ ရွေးပြီး တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ ဦးတည် ချီတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ ကတိစကားတွေကို ဘယ်သူတွေက အယုံအကြည် ရှိတော့မှာလဲ။ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင် နိုင်ငံတွေဆီကနေ လူသားချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတွေ လက်ခံနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဝန်ကြီးတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကျတော့ လူသားချင်း မစာနာတော့ဘူးလား။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘက်ကတော့ ဒီကိစ္စတွေအပေါ် တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာ ဘာမှမကြားရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်လမ်းပေါ်ရှိ ၁၁၅ မိုင်က ကျူးကျော်ဆိုင်ခန်းတွေ ဖျက်စဉ်တုန်းကဆိုရင် ဒီလိုဖျက်တာ ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ အမြင်သပ်ရပ်သွားပြီး စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်လာတာဟာ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ Facebook မှာ မှတ်ချက်ရေးတာ ကို တွေ့ရဖူးပါတယ်။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တကယ်ယုံကြည်ရင်၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ တကယ်ပဲ အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ လိုနေပြီလို့ ယုံကြည်ရင် အာဏာပိုင်များအနေနဲ့ ခေတ်ဟောင်းက Mindset စိတ်အမူအကျင့်တွေကို အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
“ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ထဲက အမိန့်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လို့ မရနိုင်ပါ။ ဘာကြောင့် ရေဘူးပေါက်နေတာလဲဆိုတဲ့ နောက်ခံ အချက်အလက်ကို ရှာဖွေဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
စနစ်ဟောင်းကနေ စွဲကပ်ပါလာတဲ့ အမိန့်ပေးစနစ် နေရာမှာ အများပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ စနစ်သစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာအောင် အားလုံးဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုနေပါကြောင်း အလေးအနက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Post by Min Min.